Friedrich Schiller University of Jena Yokuxhumana
Wasekelwa : 1558
Ungakhohlwa xoxa Friedrich Schiller University of Jena
Bhalisa at Friedrich Schiller University of Jena
Friedrich Schiller University Jena is eyunivesithi ucwaningo zomphakathi elise Jena, Thuringia, Germany.
Inyuvesi yasungulwa ngo 1558 futhi siphakathi 10 amanyuvesi endala kunazo zonke e Germany. It is abasemaqenjini 6 Nobel Prize abawinile, iningi Muva 2000 lapho Jena graduate Herbert Kroemer won uMklomelo KaNobel ngenxa physics. It iqanjwe kabusha ngemva imbongi Friedrich Schiller owayefundisa njengoba uprofesa wefilosofi lapho Jena bakhangwa ezinye izingqondo ezinethonya kunazo ekuqa- ngekhulu le-19. With Karl Leonhard Reinhold, Johann Gottlieb Fichte, G. W. F. Hegel, F. W. J. Schelling futhi Friedrich von Schlegel abasebenzi bayo yokufundisa, inyuvesi bekulokhu esikhungweni ukuvela ukukhohliseka German kanye Romanticism zakuqala.
Njengoba of 2014, inyuvesi has azungeze 19,000 abafundi ababhalise futhi 375 osolwazi. umongameli Its wamanje, Walter Rosenthal, wakhethwa ngo 2014 Okwe 6 iminyaka term.
The Friedrich Schiller University in Jena, eyasungulwa ngo 1558, nomnikelo walo 21,000 abafundi okuye kwasakazwa eminyakeni ikhono ezahlukene eziyishumi eshiya izibazi umfanekiso edolobheni. Abafundi noma eyunivesithi noma eyunivesithi wesayensi sisetshenziswa ukwenza eyodwa kwezine abakhileyo Jena. Ngakho, kulungile ukusho: Akukho university in Jena, Jena is a enyuvesi! Balinganiselwa ku 340 oprofesa 6,400 amalungu umsebenzi abasebenzi esibhedlela eyunivesithi kanye university, the yokugcina zazo ulokhu zibe esinye sezibhedlela esimanjemanje kakhulu eJalimane.
I nyuvesi ekhonze on ngokujulile ukunakekela abafundi bayo, futhi isebenza ekwakheni “abafundi’ IPharadesi in Jena. Izinhlelo eziyisipesheli ukusekela bafundzi labavela ngesheya. Uma kuziwa ekufundiseni, Jena University ihlanganisa isiko kanye emisha: Ngaphandle kokuthi imithi, physics, Psychology, izifundo zebhizinisi nezezimali kanye, noma ezemidlalo, bio kanye nesakhiwonchanti setenhlalo sciences – konke okuyizinto zibekwa kakhulu – okubizwa ngokuthi “izikhonzi ezincane”, like Ngokwesibonelo caucasiology, izifundo Romanian noma Indo-zamaJalimane, basuke eyaqinisa. I anhlobonhlobo amathuba sokutadisha eyunivesithi Thuringia BakaJehova kuphela classical Bobunjwa labangemada- ukubonakala kwawo kanye salo sengqondo sokungafuni: ukuze senze ngaphandle kwemingcele – interdisciplinarily nakumazwe omhlaba. Ngakho, iphrofayli ucwaningo ecacile isisunguliwe futhi atawutfutfukiswa. Iphrofayela ukucwaninga okwenziwayo manje Jena University yakhiwa izindawo zocwaningo ezibekwe eqhulwini ezinhlanu:
yokukhanya, Photonics futhi sefonetiki Technologies
Materials Innovative Technologies futhi
Abantu ngabanye Guqula Social
Basuke waqedelwa ezintathu academic cross-izigaba:
Analysis and Management Systems Complex;
Timongcondvo temasiko of Ageing;
Umsuka eYurophu: Amasiko Nenkolo in the World Ancient Ephakathi
Up-and-ozayo ososayensi young ukulungele kahle imisebenzi yabo ngoba osekelwa Jena Graduate Academy. Ngemva kwalokho, sihloko esiqakatheke of “ukunakekelwa ingane” liyavela ajenda senyuvesi. Njengoba omunye wabasunguli be- “Jena Alliance for Family”, Jena University imelela ukuhambisana enabantwana nokutadisha. Kwalokhu, ithole Total E-Quality Award. The Friedrich Schiller University ubuye nasemhlabeni wonke kahle-bodumo: It is bafakwe amanethiwekhi ezibalulekile, like the Coimbra Group, futhi ibambisane ezingaphezu kuka 100 emayunivesithi noma ezikhungweni zemfundo emhlabeni wonke. With cishe 300 abalingani ngaphakathi Europe exchange acacile labafundi nothisha ekuthatha indawo.
Ngo 2008 Jena iye yaklonyeliswa isihloko yaseJalimane “City of Sciences”. 2008'S imicimbi babengabafuni ehlaselwe imisebenzi senyuvesi. Futhi, esikhathini esizayo, inyuvesi ufuna asekele nethonya elinamandla lokufundisa, ucwaningo kanye namasiko, kuzwelonke nasemazweni omhlaba.
Isayensi Komphakathi kanye yokuziphatha
Chemistry kanye Earth Sciences
Biology kanye Ikhemisi
Phakathi neminyaka embalwa nje we nombhikisho wezombusazwe eMpumalanga Jalimane esincane Thuringian edolobheni university of Jena iqhakazile zibe nendawo enkulu omhlaba yokufunda. Isimo ushintsho evelele, kodwa naphezu lesi siqalo esisha ngokuthi umuntu abheke emuva basazikhumbula phezu isiko grand: Goethe, Schiller, Hegel no Fichte kwashiya izibazi ukuphila bokusungula, Abbe, Zeiss futhi Schott babeka isisekelo ukuchuma kwezomnotho.
I cishe 25 000 abafundi Friedrich Schiller University kanye University of Applied Sciences ukunikeza onekhono phakade bobusha kuwo umuzi 100 000, okuyinto lizungezwe muschelkalk amawa futhi izungezwe fantastically ku Saale emfuleni esigodini. Izizukulwane yezimbongi, zefilosofi futhi abafundi wahlabelela izindumiso yayo ingoma kanye izinkondlo, mhlawumbe kahle kakhulu Gottfried Benn: “Jena phambi kwethu, esigodini ajabulisayo“. Yonke indawo eyodwa iya isiko akukho ukuphunyula kuso — Ngaphezu kwakho konke, ukuthi Romanticism, Classicism, futhi ezinsukwini zakuqala. Umfundi oyingqayizivele indlela yokuphila yaqala Jena waqhubeka kube nemiphumela ebuhlungu ayisisekelo kwezombangazwe: lokhu lapho umfundi elangenza lokuqala kakhulu kwakhiwa, kabani omnyama obomvu-igolide banner, namuhla imibala kazwelonke, uye uphawu umoya wentando yeningi wobunye, yebulungiswa nenkhululeko kusukela emhlanganweni eWartburg e 1817. Fraternities kungenzeka ukudlala esiningi indima Jena ngasekupheleni kwekhulu lama-20, kodwa inkumbulo lokhu ukuvela yeningi iyagcinwa hhayi kuphela yilezi abasebenzisa ama of kuze kudabuke umhlane colorful caps.
izinguquko ezinkulu kanye kusukwe kusukela esikhathini esidlule kubonakale bezilokhu okukhethekile Jena. Lapho kuqala osolwazi ezimbili, Stigel futhi Strigel, futhi yabo 171 abafundi wathutha ku-Collegium Jenense, owayekade Dominican sezindela, e 1548, eNgophezukonke zabo, Johann Friedrich mina, wayesekhona esitokisini imperial. njengoba “ngubhongoza” Protestant Schmalkaldian umbimbi laseWettin Electoral Prince wayeseke waphuphunyelwa inhlekelele kokunqotshwa empini yokulwa umqhele bamaKatolika kwadingeka ukunikezela esihlalweni sakhe esidala inyuvesi eWittenberg umzala wakhe wazonda Moritz. Endaweni manje ngaphansi kokubusa kwakhe, okuyinto yayisinezisebenzi eyodwa ebukhulwini baso bangaphambili, wakhetha Weimar njengoba esihlalweni olusha lukahulumeni futhi wasungula edolobheni elingumakhelwane ka landholders amancane iwayini-abatshali a Hohe Schule (college) ukuqeqeshwa of abefundisi bamaProthestani nothisha. elikhulu kuphela “Indawo Electoralis” ka Friedrich the Hlakaniphile wasinda futhi waletha olusuka eWittenberg luya Jena.
Ezinsukwini zokuqala zifiki zezemfundo awazange ncamashi ngezandla ezifudumele, — lo uxolelwe osolwazi kusukela intela utshwala imikhuba ngesihluku futhi elungele abafundi babo, ngubani ngenxa ngezinga elikhulu yokuzimela zomthetho kungaba ngisho umuzi onotshwala izinkantolo zendawo, babe iva ohlangothini izakhamuzi okuqondile. Abahlakaniphé, Nokho, the neyobuntu, isikhungo kabusha egxile zemfundo wenza intuthuko ngokushesha sokugcwaliseka kwaso; maphakathi nawo-1550s Jena yayisivele ithathwa njengendlela isikhungo ehola ngeNkathi Yezinguquko, futhi uhlelo lowezi-Jena imisebenzi kaLuther kwase kudlule iphrojekthi ukuncintisana ngaleso eWittenberg. Kodwa kwaze kwaba 1558 ukuthi Jena Hohe Schule wathola ilungelo imperial njengoba inyuvesi.
Cishe 100 eminyakeni eminingi kamuva, sokuphuma ekuseni yesimanje inkathi kabusha inyuvesi nge amakhono amane — Philosophy, Theology, Law and Medicine — bebeye umphakathi nocwaningo abanezifiso ezihlukahlukene kakhulu. I sezibalo nesezinkanyezi Weigel, owafundisa Leibniz, phakathi kwabanye, ubhekwa njengomunye wabasunguli be umcabango ngokwesayensi. Lezi izimpande inyuvesi okuyinto, kanye imbali, bazothola imali lo epithet “hoarder yolwazi”. Umuntu abaphuma endleleni zakhe ukuze zibonise ukuthi enjalo yokudumisa ophakeme wayengumholi, njengoba “Superintendent Izinyathelo Direct zesayensi Art”, hhayi okungenani ukubonga kule ukuthuthukiswa: ikhansela azitshelwa uJohann Wolfgang von Goethe methodically wacela ongqondongqondo ovelele kanye nabacwaningi phakathi Duchy lesifunda elincane okwakuhlala futhi ehlelekile wadala izimo ezinhle ngomsebenzi wabo. Imitapo, izingadi zezimila, archive umlando wemvelo kanye laboratories bonke babengaphansi kuncike uMariya kwezimali ukuze. Institutions ezifana izindikimba kanye nokuqoqwa mineralogical usukela emuva isinyathelo sakhe. Ngesikhathi esifanayo siqu izifiso Goethe kwezesayensi ayezuza lokhu ingqalasizinda. Basebenzelana eduze kwemithi Doebereiner, umsunguli uhlelo gqwa, futhi ne anatomist Justus Loder. search wakhe waphumelela njengendawo ithambo intermaxillary ubhekwa njengomunye sezibonelo bokuqala ocwaningweni lwezokwelapha oluhlosiwe enkathini yesimanje; zezinhlobo okulungiselelwe eyalotshwa imbongi-isikhulu yena Namanje ezigcinwe yokwakheka Ukuqoqwa University of Jena.
Esiwujuqu, Nokho, ngokuba classical-romantic Yingakho eminyakeni khona ekuqaleni “inethiwekhi”, okuyinto ngaphansi kwezimo oncomekayo bahlangana emangalisayo greats obuhlakani endaweni eyodwa. Hegel, Fichte futhi Schelling, Voss, abazalwane Schlegel futhi Friedrich Schiller — njengoba uprofesa womlando — zonke ezifundiswa idolobha Saale, ngenkathi Novalis, Hölderlin, Brentano, Föbel futhi Arndt wahlala izinkulumo zabo.
amagama emigwaqo Namuhla hhayi kuphela futhi zingcwecwe, kodwa futhi ngothando abuyiselwe izakhiwo, ngikufakazele lesi sikhathi: ngoba indlu engadini Ngokwesibonelo Schiller sika, ikhaya Fichte sika, yokuhlala Superintendent sika Goethe sika ku izingadi zezimila, noma Fromann House, okuyinto namuhla ukhonza njengomdala sikhungo ngoba izazi-German-mlando. Ubuningi okumangalisayo isiko kuleyo minyaka, okuyinto kwaba ukuqala radical Paradigm shift kwamasiko isayensi enhloko-dolobha yaleli Ernestine lwamakhosi sika angamawele, manje isihloko DFG (Research Council German) Ukuhlanganisa Research Project “I Weimar – Jena. Isiko azungeze 1800”.
Kodwa isisekelo idumela Jena sika omhlaba njengenxusa isikhungo zezimboni ayidalwanga kuze mayelana 70 eminyakeni eminingi kamuva Umlaza fortuitous ubuntu — waphinda eyunivesithi. Zeiss sika ngokunemba ubunjiniyela kanye yokukhanya isitshalo kanye chemical ingilazi usebenza Schott & Gen. ladalwa cishe njengoba spin-off amabhizinisi aphume Alma Mater — okuningi ngendlela efanayo njengoba abaningi silibone ngeso lengqondo nalomsebenzi eJalimane njengenhlangano evumelekile ngokomthetho indawo zobuchwepheshe ngokusebenzisa dovetailing eduze isayensi kwezebhizinisi. Leli fomu wokubambisana phakathi baseyunivesithi umkhakha savela ngokwemvelo Jena, kunjengokungathi.
Umfutho ukuvela ku ezezimboni wanikezwa Ernst Abbe (yaqoka uSolwazi nobudlelwano 1870), ngubani, esafunda eko-30 ubudala ekuqaleni, athuthukile kakhulu inkolelo yakhe yokuziphendukela isibonakhulu isithombe ukwakheka, okuyinto wacabangela mkhuba ajwayelekile umumo womsebenzi, futhi kanjalo wenza eqa ekwakheni isibonakhulu kusukela amaphutha design methodical. Yanikwa lo myalo ngokutshela umakhenikha inyuvesi, Carl Zeiss, owayekade kancane kancane siphelelisa ukwakhiwa imishini optical e workshop yakhe yangasese. Otto Schott, abathola iziqu zakhe ngesikhathi Jena e 1875, kwaba wesithathu ukungena kule umfelandawonye by wokusungula, ancengwa Abbe sika, a “Laboratory Glass Technology” e 1884, ukukhiqiza abahlanzekile kakhulu lens esikhethekile nangezibonakhulu Zeiss futhi imishini optical. Umfundi Humboldt sika Matthias Jakob Schleiden, UProfesa Botany nabadumile ukuze uthole esitokisini sakhe ithiyori, babekhuthazwa — futhi kamuva bazuza — le nqubo, okuyinto Sasiwukufakazela okuyisibonelo emlandweni kwezomnotho German.
Ukuphumelela Zeiss isitshalo alethwe abasebenzi eziningi abaqeqeshiwe baya emzini, kanye labantu rose ngqo nge 150% esikhathini kusuka 1870 kuya ngasekuqaleni kwekhulu lama, ukuba cishe 25 000. Lokhu kuchuma entsha, okuyinto Zeiss futhi Abbe wabelane nabasebenzi ngokusebenzisa isimiso ukuphayona nomphakathi begodu ukutjhugululwa ekuqaleni ibhizinisi libe isisekelo, nazo zalandela inkambo inzuzo edolobheni futhi inyuvesi: Ngokwesibonelo le Volkshaus, isikhungo kwamasiko kanye ehholo, Yakhiwa Zeiss imali, futhi lapho oprofesa nabafundi wathuthela esakhiweni esisha ngosuku esenzeka engu-350 yeSivumelwano eyunivesithi 1908, Zeiss Foundation iminikelo kwakungezona okungenani ukubonga salokhu. Umhlangano omkhulu kunayo yonke olulodwa umnikelo yangasese ukuze okukhazimulayo Art Nouveau isakhiwo isonto futhu yaseshashalazini wezakhiwo Theodor Fischer babevela Otto Schott.
Isikhathi-span phakathi Gründerzeit kanye Weimar Republic, I-Jena njengoba isikhungo yesimanje yokufunda, mhlawumbe zibaluleke ngaphezu kwenkathi avame ukusho classical-romantic. I isazi sezinto eziphilayo u-Ernst Haeckel, le umhlaziyi ezibaluleke kakhulu yokuziphendukela kwemvelo ngemva Darwin, ezifundiswa Jena, njengoba kwenza sezibalo logician Gottlob Frege, bani ehola wesimanje-Anglo-Saxon zefilosofi zilandise njengenhlangano nethonya. Futhi Kuhle kokusho kukhona Hans Berger, ngubani wathola electroencephalogram (Bheka), le udokotela wezengqondo Otto Binswanger, sefilosofi Rudolf Eucken, izazi-mlando Johann Gustav Droysen no-Aleksandru Cartellieri, the Philologists Sievers futhi Delbrück, the pedagogues kabusha Stoy futhi Petersen, isazi sezomthetho esidumile Eduard Rosenthal kanye noMax Wien, elinye lamaphayona ka telegraphy engenantambo. Jena wajabulela nenkathi yokudlondlobala kwawo e ezobuciko sibonga avant-garde umbuthano kwayiwa abaculi kugxile Eberhard Grisebach futhi Botho Graef: ngemva esibandakanya Weimar Auguste Rodin uthole i zobudokotela zokuhlonipha e 1905, futhi eminyakeni 1907-09 Ferdinand Hodler wadala Umdwebo abadumile omkhulukazi “abafundi German oveza seMpi of Liberation of 1813” omusha ihholo inkulumo inyuvesi. Ukusebenza kanye nemibukiso ngokuhanjelwa Expressionists eziholayo ukuxhumeka Weimar Bauhaus kwashiya izibazi ukuphila nesobuciko saleli dolobha.
Naphezu — noma mhlawumbe ngokunembile ngenxa — isimo sezulu sipholile, libertarian kwanda nokhahlo kwamehlela nezazi Jena BakaJehova e-1920 maphakathi. Umcabango model-National Socialist inyuvesi ngokushesha ladalwa, futhi abameleli ehola theory zobuhlanga kanye ukubulawa kwesiguli usethe lapha — iseduzane ngokushesha ekamu lokuhlushwa Weimar-laseBuchenwald.
Ukulandela lwesigaba emfushane kabusha emva 1945 Alma Mater waphinda labambeka ku obishini lokuphelelwa amafilosofi zezombusazwe, futhi manje kulindeleke ukuba luphenduke “inyuvesi sezenhlalo”. Uphawu osobala kakhulu lena “cwaninga ephezulu liphumele”, Lakhiwa 1967-72 ngokuvumelana amacebo ngu GDR inkanyezi wezakhiwo Herbert Henselmann futhi wayeqondeni ngenxa kahulumeni VEB Carl Zeiss, kulo izifundiswa kwadingeka sithuthe. Ngezinye 127m kulesi sibonakaliso abavelele babengasiqondi sezenhlalo kobushiqela izakhiwo imibhoshongo phezu idolobha Saale. Noma kunjalo: emthunzini walo sekukhona umoya ukumelana bangamavukela-mbuso, futhi Jena ayebhekwa njengengxenye uyisiphephelo ophikisana nenqubo kahulumeni e-GDR.
Ngo 1989 oprofesa nabafundi ababhikishe ezitaladini ndawonye; izingqinamba on inkululeko bokusungula kwase Cishe ubulokhu wazizwa ndawo ngakho oppressively njengoba emasimini ucwaningo kanye nemfundo. Ngokushesha ngemva nombhikisho wezombusazwe University of Jena eyenziwa izinyathelo ezinzima ezinzima futhi: njalo uthisha nohlolwe, futhi aphume neminyango zangaphambili ezikhona kwakumiswa amandla letilishumi contoured, classical, inyuvesi oluphelele — kuphela inyuvesi enjalo in eThuringia. A campus entsha yasungulwa kusayithi wangaphambilini we-main Zeiss sitshalo enkabeni yedolobha, kanye bhiliyoni-uphawu wokwakha “University Umtholampilo 2000” ithole kusasebenza. Bebheke noHlelo nemfundiso inyuvesi futhi wathatha amasiko endala: the okuhlukahlukene kakhulu Philosophical Faculty, Ngokwesibonelo, lapho ezibonakala “exotic” Amasimu njengathi Oriental Lasendulo, ZaseCaucasia futhi Indo-zamaJalimane Ucwaningo luthole ikhaya. Noma e-Faculty Medical, okuyinto ithathe indima umnakekeli phezulu kuwo wonke Thuringia nge embhedeni-1400 yayo umtholampilo. Futhi-ke physics kanye wesayensi yezinto eziphilayo bafanelwe Ukukhuluma.
Ukufinyeleleka kanye kuhlobene inethiwekhi ocwaningo izimfihlo ekuvuselelweni lomuzi phezu Saale njengoba isikhungo sokufunda. abaqondisi abaningi futhi umnyango izinhloko nezikhungo ze-non-enyuvesi in Jena futhi ubambe professorships eyunivesithi. Beyond le Uni Jena igcina umbimbi inyuvesi nge Halle and Leipzig. Wabelane, ezimweni eziningi amaphrojekthi imikhakha eyahlukene, isb. ku emihlanu DFG ezihlanganyelwe Ucwaningo Centres futhi Innovationskollegs eziyisikhombisa (inkulumo uchungechunge), imiphumela yemvelo. Lo moya evundile olinde useyakungenisa mayelana wonke uhide lwezinto nakangaka engavamile futhi ethembisa ocwaningweni, eziningi zazo usenziwa njalo imikhakha eyahlukene ngaphakathi amanethiwekhi wokubambisana.
Kodwa isimo sezulu Jena futhi kubonakala kokuba nethonya elihle lokufundisa: ubudlelwane sokweluleka phakathi abafundi kanye abafundisayo uma kuqhathaniswa omuhle, — ngempela ukuba kube sezingeni lokuba nethemba Yiqiniso ngokushesha futhi kakhulu izifundo wathonyelwa inombolo ngokusobala elikhulu labafundi ukunikeza Alma Mater izimpawu zabo phezulu yakamuva amazinga inyuvesi ngu e “Spiegel”, “Stern” futhi “Stiftung Warentest”. Kuyinto umgomo ezivamile salabo abanomthwalo wemfanelo wokwenza eyunivesithi, futhi ngesikhathi kudolobha nezwe ezingeni ukuthi lokhu ukuthuthukiswa kufanele uqhubeke ungaphazanyiswa.
Uyafuna xoxa Friedrich Schiller University of Jena ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
Friedrich Schiller University of Jena kumephu
Izithombe: Friedrich Schiller University of Jena Facebook ezisemthethweni
Friedrich Schiller University of Jena Izibuyekezo
Joyina ukuxoxa ka Friedrich Schiller University of Jena.